Faa’idada koritaanka caruurta ay u leedahay timirtu: Koritaan deg-deg ah ayay bilaabaan caruurta cunta timirta. Faytamiin A da ku jirtaa wuxuu dardar galiyaa aragga caruurta. Waxa ay timirtu muhiim u tahay sida oo kale hooyada kolka ay leedahay uurka. Timirtu muddadan waxay hoos u dhigtaa werwerka, walaaca iyo walbahaarka soo waajaha hooyada. Kolkay umusho laftigeeda kama maaranto hooyadu.
In aad afuriso qof sooman oo aad cabbitaan iyo cunto siiso waxa ku jira abaal marin aad u weyn, waana arrin Rasuulku CSW dadka ku booriyey kuna dhiiri galiyey.
Halkan guji Q1aad ,2aad,3aad iyo 4aad